Ultra Precision Kugadzira Solutions Vagadziri & Vatengesi - China Ultra Precision Kugadzira Solutions Factory
Granite Surface Plate ine Welded Metal Cabinet Rutsigiro
Use for Granite Surface Plate, muchina chishandiso, nezvimwewo centering kana rutsigiro.
Ichi chigadzirwa chakakwirira mukuremerwa zvinoremerera.
Pamusoro ndiro inomira pamusoro peplate: Granite Surface Plate uye Cast Iron Precision.
Yakagadzirwa ichishandisa Square pombi zvinhu nekusimbisa kudzikama uye nyore kwekushandisa.
Iyo yakagadzirirwa kuitira kuti iyo Surface Plate yakakwira kurongeka ichengetwe kwenguva refu.
Optic Vibration Insulated Tafura
Kuedza kwesainzi munharaunda yanhasi yesainzi inoda kuwanda uye kuyerwa kwakanyanya uye kwakaringana. Naizvozvo, mudziyo unogona kuve wakasarudzika kubva kune yekunze nharaunda uye kupindira kwakakosha kwazvo kuyerwa kwemhedzisiro yekuyedza. Inogona kugadzirisa akasiyana-siyana emagetsi zvinhu uye maikorosikopu imaging michina, nezvimwe. Iyo yekuyedza kuyedza chikuva yakavewo inofanirwa-kuve chigadzirwa mune kwesainzi yekuyedza kuyedza.
Nemazvo Cast Iron Surface Plate
Iyo simbi yakakanda T yakatsemurwa pamusoro peplate chishandiso chekuyera chiindasitiri chinonyanya kushandiswa kuchengetedza workpiece. Vashandi vebhenji vanoshandisa iyo kugadzirisa, kuisa, uye kugadzirisa michina.
Mira - Kuti ikwane Granite Surface Plates (1000mm kusvika 2000mm)
Surface Plate Mira nekudonha kudzivirira maitiro
Iyi tsigiro yesimbi yakagadzirirwa kutsigira vatengi 'granite yekuongorora ndiro.
Jack Yakagadzirirwa Granite Surface Plate
Kune zvigadzirwa zvinopfuura 2000x1000mm saizi, funga kushandisa Jack (5pcs yeimwe seti).
Yakagadzirwa-Yakagadzirwa UHPC (RPC)
Iwo asingaverengeke akasiyana mashandisirwo ehunyanzvi hwepamusoro-tekinoroji uhpc haasati afanoonekwa. isu tanga tichigadzira nekugadzira indasitiri-yakaratidza mhinduro dzemakambani akasiyana mukubatana nevatengi.
Mineral Kuzadza Muchina Mubhedha
Simbi, yakasungwa, simbi deko, uye zvivakwa zvinokandwa zvinozadzwa nekudonhedza-kudzikisa epoxy resin-yakasungwa maminera kukanda.
Izvi zvinogadzira zvimiro zvinoumbwa pamwe nekugadzikana kwenguva refu-izvo zvakare zvinopa yakanakisa nhanho yeanomira uye akasimba kuomarara
Zvakare inowanikwa ne radiation-inotora yekuzadza zvinhu
Mineral Kukanda Machine Mubhedha
Isu takamirirwa zvinobudirira mumaindasitiri akasiyana siyana kwemakore mazhinji neayo-mumba zvigadzirwa zvakagadzirwa zvekucheka zvicherwa. Zvichienzaniswa nezvimwe zvinhu, zvicherwa zvichikandwa mune zvemainjiniya inopa zvakati wandei zvakanakira.
KUSVIRA-KUSHANDISA & TAILOR-MADE MINERAL Casting
ZHHIMG® zvicherwa Kudzingwa kweakakwira-mashandiro emuchina mibhedha uye muchina mubhedha zvinhu pamwe nekupayona kuumbwa tekinoroji yeusingaenzanisike nemazvo.
Nemazvo Kudzingwa kwakakodzera kuburitsa castings neakaoma maumbirwo uye yakakwira yepamusorosoro kunyatsoita. Nemazvo Kudzingwa kune yakanakisa pamusoro pekupedzisira uye kujeka kweakarurama. Uye inogona kuve yakakodzera kune yakaderera huwandu hwekukumbira odha. Pamusoro pezvo, mune zvese dhizaini uye sarudzo yezvinhu zvekukanda, Precision castings ine rusununguko rukuru. Iyo inobvumidza mhando zhinji dzesimbi kana chiwanikwa simbi yekudyara.Saka pakukanda musika, Precision Kudzingwa ndiyo yepamusoro mhando castings.
Nemazvo Granite Surface Plate, Epoxy Concrete, Nemazvo Granite, Precision Granite Square Mutongi, Nemazvo Granite Kufanana, Nemazvo Granite Cube,